(နေစကြာဝဠာပြင်ပဂြိုဟ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ "My God, it's full of planets! They should have sentapoet." (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Planetary Habitability Laboratory, University of Puerto Rico at Arecibo။3January 2012။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နေစကြဝဠာပြင်ပဂြိုဟ်&oldid=707568" မှ ရယူရန်
၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။